မွနျမာ Esports အသငျးတှေ SEA Games မှာ ဘာကွောငျ့အရေးနိမျ့ခဲ့ရသလဲ? – Gaming Noodle
မွနျမာ Esports အသငျးတှေ SEA Games မှာ ဘာကွောငျ့အရေးနိမျ့ခဲ့ရသလဲ?
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး အခုကငျြးပသှားတဲ့ ဖိလဈပိုငျ SEA Games 2019 Esports ပွိုငျပှဲမှာ မွနျမာအသငျး ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ဂိမျး (၃) မြိုးစလုံး (Dota2, Mobile Legends, Arena of Valor) မှာ အားလုံး အုပျစုအဆငျ့ကနေ လှညျ့ပွနျလာခဲ့ရပါတယျ။
ဒါဟာ ပထမဆုံး ဆုတံဆိပျပေးအပျတဲ့ ဒသေတှငျး တရားဝငျအသိအမှတျပွု အိုလံပဈအဆငျ့ Esports ပွိုငျပှဲတဈခုအနနေဲ့ ပါဝငျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ ကစားသမားတှရေော၊ ပရိသတျတှေ အတှကျပါ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ရလဒျတဈခု ဖွဈပါတယျ။
Esports ကို အားပေးတဲ့ အမာခံပရိသတျတှရှေိပမေယျ့လညျး ပုံမှနျအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ SEA Games Esports ပွိုငျပှဲဝငျအသငျးတှကေို အခုလောကျ မြှျောလငျ့ခကျြ ထားခငျြမှထားကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလောကျက စပွီး Team Cyanide Dota2 ရဲ့ WESG South East Asia တတိယဆု၊ Burmese Ghouls ရဲ့ MLBB ကမ်ဘာ့ Championship ပွိုငျပှဲ စတုတ်ထဆုနဲ့ တက်ကသိုလျပေါငျးစုံ Dota2 ပွိုငျပှဲမှာ ထိုငျးနဲ့ မလေးရှားအသငျးတှကေိုကြျောဖွတျ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ ဒဂုံတက်ကသိုလျ စတဲ့အောငျမွငျမှုတှကွေောငျ့ Esports ပရိသတျမြားသာမက အခွားပွညျသူမြားကပါ စောငျ့ကွညျနခေဲ့ရတဲ့ အားကစားတဈခု ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဆုတံဆိပျတဈခုတောငျ မရရှိပဲ ၃ သငျးလုံး အုပျစုအဆငျ့ကနေ လှညျ့ပွနျလာရအောငျ ဘယျအရာတှကေ ဟနျ့တားခဲ့ကွလဲ ဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို စာရေးသူမှ အခကျြ ၃ ခကျြကို အခွခေံပွီး နညျးနညျးလောကျဝဖေနျသုံးသပျခှငျ့ပွုပါခငျဗြာ။
နိုငျငံခွားပွိုငျပှဲ အတှအေ့ကွုံ အားနညျးခွငျး
စာရေးသူ သိရှိရသလောကျ ယခုသှားရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ၃ သငျးထဲမှာ Dota2 အသငျးကလှဲရငျ ကနျြတဲ့ AoV နဲ့ MLBB အသငျးတှဟော နိုငျငံခွားပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံ လုံးဝမရှိကွပါဘူး။ MLBB အသငျးက ကစားသမားအခြို့ကတော့ အသငျးဟောငျးတှနေဲ့ နိုငျငံခွားပွိုငျပှဲတှေ သှားရောကျယှဉျပွိုငျဖူးပမေယျ့ အသငျးလိုကျအတှအေ့ကွုံတော့ မရှိကွပါဘူး။
Online ပျေါကနဆေော့ရတဲ့ ပွိုငျပှဲနဲ့ နိုငျငံရပျခွားတဈခုက Esports Stadium (သို့မဟုတျ) ခနျးမတဈခုမှာ ဆော့ရတဲ့ ပွိုငျပှဲက ကှာခွားမှုကွီးမားလို့ နိုငျငံခွားပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံဆိုတာက အရေးကွီးတဲ့ လိုအပျခကျြတဈခုပါ။ ကိုယျမရငျးနှီးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြတဈခုမှာ ကိုယျ့အမာခံ အားပေးနမေယျ့ ပရိသတျတှေ မပါပဲနဲ့ ဆော့ရတာ ဖိအားအနညျးနဲ့ အမြားတော့ ရှိနမှောပါ။
ဒါဆိုရငျ နိုငျငံခွားပွိုငျပှဲအတှအေ့ကွုံ မြားပွားလှတဲ့ Dota2 အသငျးကရော ဘာကွောငျ့ကရြှုံးခဲ့ရတာလဲ? ဒါကတော့ ဒုတိယခေါငျးစဉျမှာ ဆကျလကျရှငျးပွပါမယျ။
ပွညျပအသငျးတှမှော သှားရောကျ မကစားဖူးခွငျး
ဆိုလိုတာက ပွညျတှငျး pro တှကေို ပွညျပထှကျပွီး ကွေးစား ကစားစခေငျြတာပါ။ Dota2 အသငျးက ကစားသမား (၅) ယောကျလုံးဟာ အိန်ဒိယအသငျးတဈသငျးမှာ သှားရောကျဆော့ကစားဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ပွညျပကစားသမားတှနေဲ့ တှဲဆော့ခဲ့ရတာမြိုး မဟုတျတဲ့အပွငျ အိန်ဒိယ Dota2 အဆငျ့အတနျးဟာလညျး မွနျမာနဲ့ ကှာခွားမှု ကွီးကွီးမားမား မရှိတာမလို့ ဒါကို နိုငျငံခွားအတှအေ့ကွုံ အပွညျ့အဝရတယျလို့ မယူဆနိုငျပါဘူး။
အနီးစပျဆုံးအနနေဲ့ ယခု SEA Games Dota2 အသငျးက Insane ဟာ ထိုငျးနိုငျငံအခွစေိုကျဖွဈတဲ့ Clutch Gamer အသငျးမှာ သှားရောကျကစားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့ ရကျပိုငျးခနျ့သာ လကေ့ငျြ့ခဲ့ပွီး ပွနျလာခဲ့ရပါတယျ။
ဒါဟာ မွနျမာ Esports လောကအတှကျ အလှနျတရာ နဈနာတဲ့ ဖွဈရပျတဈခုပါ။ တကယျလို့သာ Insane သာ Clutch Gamers မှာသာ ရရှေညျမဟုတျတောငျ လအနညျးငယျလောကျပဲ ဆော့ခဲ့မယျဆိုရငျတောငျမှ သူ့ရဲ့ Teammates တှဆေီကနေ အမြားကွီး သငျယူခှငျ့ရခဲ့မှာပါ။
ဘာတှကှောခွားလဲ ဆိုတာ ထောကျပွရရငျ Insane Clutch Gamer ကို စတငျရောကျရှိခဲ့ခြိနျက Teammate တဈဦးဖွဈတဲ့ “Nikobaby” က TI9 ကို Mineski နဲ့ ကစားဖူးတဲ့အပွငျ အခုလညျး Alliance လို အသငျးကွီးမြိုးမှာ လကျစှမျးပွနိုငျနပေါပွီ။ နောကျ ex-teammate တဈယောကျဖွဈတဲ့ “kyxy” ကလညျး အခုလာမယျ့ ဒုတိယ Major ဖွဈတဲ့ DreamLeague 13 Leipzig Major မှာ Reality Rift အသငျးနဲ့အတူ ပါဝငျခှငျ့ ရရှိထားပါတယျ။
Insane သာ အဲလို Teammate တှနေဲ့ ပွိုငျပှဲတှဆေော့ဖူးလိုကျမယျဆိုရငျ နိုငျငံခွားအသငျးတှမှော ဘယျလို ပွငျဆငျလကေ့ငျြ့တယျ၊ ဘယျလို Skill ကောငျးအောငျလုပျတယျ၊ ဘယျလို နညျးစနဈအသဈတှေ ရှိတယျ ဆိုတာမြိုးကို သိရှိလာခဲ့ပွီး ပွညျတှငျးမှာ ပွနျလညျမြှဝနေိုငျခဲ့မှာ ဖွဈလို့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှေ ဖွဈလာမှာပါ။ အနီးစပျဆုံးပွောရရငျ မွနျမာအသငျး 2-0 နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ Laos Dota2 အသငျးက Core3ယောကျလုံးဟာ ထိုငျးထိပျသီး အသငျးတှဖွေဈတဲ့ Alpha Red နဲ့ MSCerberus တို့မှာ ကာလအတနျကွာ ကစားဖူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးတှေ ရှိနပေါတယျ။
ပွညျပထှကျကစားစခေငျြတယျဆိုတာ Dota2 တငျမဟုတျပဲ အခွားဂိမျးအမြိုးအစားတှမှောပါ ကိုယျထူးခြှနျရငျ ထူးခြှနျသလို ပွညျပကို ကွေးစား သှားရောကျကစားစခေငျြပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာဆိုရငျလညျး ဘောလုံးနဲ့ ဘျောလီဘော အားကစားတှမှော ပွညျပထှကျကစားတဲ့ ကစားသမားတှကေို တှရှေိ့နိုငျမှာပါ။
Esports ဆိုတာ ဘောလုံးလိုမြိုး လူသိမြားအခွကေပြွီးသား အားကစားနညျးတဈခု မဟုတျပါဘူး။ Esports ဟာ မွနျမာနိုငျငံကို စတငျဝငျရောကျလာတာကွာပွီဆိုပမေယျ့ တကယျတမျး ထှနျးကားလာတာက ၂,၃ နှဈလောကျသာ ရှိပါဦးမယျ။ ဘောလုံးလို နှဈရာခြီပွီး တညျရှိလာတဲ့ အားကစားတဈခုနဲ့ နှိုငျးယှဉျလို့ မရသေးတဲ့ အခွအေနတေဈခုပါ။
အဲဒီအတှကျကွောငျ့လညျး Game အမြိုးအစားတိုငျးအတှကျ အတှအေ့ကွုံရငျ့ပွီး ဩဇာအာဏာညောငျးတဲ့ နညျးပွလို လူမြိုးတှေ ထှကျရှိမှုနှုနျး အလှနျနညျးပါးပါတယျ။ ဆရာဖွဈသငျတနျးလိုမြိုးလညျး မရှိတဲ့အတှကျ ဂိမျးတဈခုအကွောငျးကို အတိုငျးအတာတဈခုအထိ ကြှမျးကငျြစှာဆော့တတျဖို့ လိုအပျသလို နညျးစနဈပိုငျးကိုလညျး ထုံးလိုခွေ ရလေိုနှောကျပွီး အမွဲ Up-to-date ဖွဈနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။
Game ဆိုသညျမှာလညျး သမာရိုးကြ အားကစားမဟုတျတဲ့အတှကျ မကွာခဏဆိုသလို Version Update မြား ထှကျပျေါလာတာမလို့ တကယျထိရောကျမယျ့ နညျးဗြူဟာတဈခုကို ပွသနိုငျမယျ့ နညျးပွတဈဦးကတော့ အသငျးတိုငျး လိုအပျပါတယျ။ ကစားသမားတှေ ဘယျလောကျတျောတယျပွောပွော ကစားသမား Mindset နဲ့မဟုတျပဲ နညျးပွ သို့မဟုတျ သုံးသပျသူ တဈယောကျလို အပျေါစီးကနေ ခွုံငုံမွငျတှနေို့ငျမယျ့ လူတဈယောကျတော့ အသငျးတိုငျးမှာ လိုအပျပါတယျ။
ဥပမာ Burmese Ghouls က PVNDV လို နညျးပွမြိုးဆိုရငျ BG စဖှဲ့ကတညျးက ကစားခဲ့တာဖွဈပွီး ပွညျတှငျးပွညျပ ပှဲအတှအေ့ကွုံသာမက ကစားသမားတှနေဲ့ပါ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီး Respect တဈခု ရယူပွီးသားမလို့ သူဟာ နညျးပွအဖွဈ ရှေးခဲ့တဲ့လမျး မှနျတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ထို့အတူ Dota2 အသငျးအနနေဲ့လညျး လကျရှိအသငျးထဲက တဈယောကျအနနေဲ့ ကစားသမားဘဝကို စတေးပွီး နညျးပွအဖွဈ ကူးပွောငျးသငျ့တယျလို့ ထငျမွငျမိပါတယျ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ လကျရှိမှာ လကျရှေးစငျ Dota2 အသငျးသား ၅ ယောကျထကျ အတှအေ့ကွုံနဲ့ အောငျမွငျမှုအပိုငျးမှာ သာတဲ့သူ ရှိမယျ မထငျပါဘူး။ သိရသလောကျ အခု SEA Games မှာလညျး Dota2 အသငျးမှာ Coach/Analyst မပါသှားဘူးလို့ သိရပါတယျ။ သူတို့ တတိယ ရရှိခဲ့တဲ့ WESG SEA မှာဆိုရငျ သူတို့နဲ့ အနီးကပျသူငယျခငျြးလညျးဖွဈ အသငျးဖျောဟောငျးလညျးဖွဈတဲ့ “Phin Mel” က Manager အနနေဲ့ လိုကျပါခဲ့ပါ သေးတယျ။
စာရေးသူအပျေါမှာ ထောကျပွခဲ့တဲ့ ၃ ခကျြလုံးဟာ အခုအခြိနျမှာသာ လိုအပျခကျြတှေ ရြှိနပမယျ့ နောငျ ၁ နှဈ ၂ နှဈလောကျအတှငျးမှာ ပွညျစုံလာနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ နိုငျငံခွား ပွိုငျပှဲတှကေလညျး အမွဲတမျးရှိနတောဖွဈလို့ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုမှ ပွညျ့ဝသှားပါလိမျ့မယျ။ ပွညျပထှကျဆော့ဖို့ ကိစ်စကလညျး SEA Games ပှဲကလှဲရငျ အခွားပွိုငျပှဲတှမှော မွနျမာ Esports အသငျး အသီးသီးက လကျစှမျးပွနိုငျခဲ့တာမလို့ မကွာခငျ ပွညျပအသငျးတှကေနေ ကမျးလှမျးခံရနိုငျတယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
နညျးပွတှအေနနေဲ့လညျး လကျရှိအောငျမွငျနတေဲ့ ကစားသမားတှေ အသကျအရှယျအရ လကျစှမျးကလြာတဲ့အခါ နညျးပွဘဝအနနေဲ့ အတှအေကွုံတှေ ပွနျလညျ မြှဝပေေးနိုငျမှာပါ။
ဒါပမေယျ့ ယခု ပွီးဆုံးခဲ့တဲ့ SEA Games Esports ကို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ ဝဖေနျ အပွဈတငျသူတှထေကျ ကစားသမားတှေ စိတျဓါတျကမြှာစိုးလို့ ဝိုငျးဝနျးအားပေးနတေဲ့ အမာခံ ပရိသတျတှေ ရှိနတောကို တှရှေိ့နိုငျမှာပါ။ သခြောတာတဈခုကတော့ လာမယျ့ ၂၀၂၁ Vietnam SEA Games ပဲဖွဈဖွဈ အခွား နိုငျငံတကာ အားကစားပွိုငျပှဲတှမှောဖွဈဖွဈ Esports အနနေဲ့ ထပျမံပါဝငျခှငျ့ ရခဲ့ဦးမယျဆိုရငျ အားပေးမယျ့ပွညျသူတှကေို စိတျပကျြစမှော မဟုတျဘူးလို့ အာမခံပါရစေ ခငျဗြာ။
မြန်မာ Esports အသင်းတွေ SEA Games မှာ ဘာကြောင့်အရေးနိမ့်ခဲ့ရသလဲ?
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အခုကျင်းပသွားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် SEA Games 2019 Esports ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာအသင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်း (၃) မျိုးစလုံး (Dota2, Mobile Legends, Arena of Valor) မှာ အားလုံး အုပ်စုအဆင့်ကနေ လှည့်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ ပထမဆုံး ဆုတံဆိပ်ပေးအပ်တဲ့ ဒေသတွင်း တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု အိုလံပစ်အဆင့် Esports ပြိုင်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ကစားသမားတွေရော၊ ပရိသတ်တွေ အတွက်ပါ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
Esports ကို အားပေးတဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေရှိပေမယ့်လည်း ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ SEA Games Esports ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကို အခုလောက် မျှော်လင့်ချက် ထားချင်မှထားကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလောက်က စပြီး Team Cyanide Dota2 ရဲ့ WESG South East Asia တတိယဆု၊ Burmese Ghouls ရဲ့ MLBB ကမ္ဘာ့ Championship ပြိုင်ပွဲ စတုတ္ထဆုနဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ Dota2 ပြိုင်ပွဲမှာ ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားအသင်းတွေကိုကျော်ဖြတ် ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် စတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြောင့် Esports ပရိသတ်များသာမက အခြားပြည်သူများကပါ စောင့်ကြည်နေခဲ့ရတဲ့ အားကစားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဆုတံဆိပ်တစ်ခုတောင် မရရှိပဲ ၃ သင်းလုံး အုပ်စုအဆင့်ကနေ လှည့်ပြန်လာရအောင် ဘယ်အရာတွေက ဟန့်တားခဲ့ကြလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာရေးသူမှ အချက် ၃ ချက်ကို အခြေခံပြီး နည်းနည်းလောက်ဝေဖန်သုံးသပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
နိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲ အတွေ့အကြုံ အားနည်းခြင်း
စာရေးသူ သိရှိရသလောက် ယခုသွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ၃ သင်းထဲမှာ Dota2 အသင်းကလွဲရင် ကျန်တဲ့ AoV နဲ့ MLBB အသင်းတွေဟာ နိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိကြပါဘူး။ MLBB အသင်းက ကစားသမားအချို့ကတော့ အသင်းဟောင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲတွေ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးပေမယ့် အသင်းလိုက်အတွေ့အကြုံတော့ မရှိကြပါဘူး။
Online ပေါ်ကနေဆော့ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားတစ်ခုက Esports Stadium (သို့မဟုတ်) ခန်းမတစ်ခုမှာ ဆော့ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲက ကွာခြားမှုကြီးမားလို့ နိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံဆိုတာက အရေးကြီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်မရင်းနှီးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ ကိုယ့်အမာခံ အားပေးနေမယ့် ပရိသတ်တွေ မပါပဲနဲ့ ဆော့ရတာ ဖိအားအနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိနေမှာပါ။
ဒါဆိုရင် နိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံ များပြားလှတဲ့ Dota2 အသင်းကရော ဘာကြောင့်ကျရှုံးခဲ့ရတာလဲ? ဒါကတော့ ဒုတိယခေါင်းစဉ်မှာ ဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်။
ပြည်ပအသင်းတွေမှာ သွားရောက် မကစားဖူးခြင်း
ဆိုလိုတာက ပြည်တွင်း pro တွေကို ပြည်ပထွက်ပြီး ကြေးစား ကစားစေချင်တာပါ။ Dota2 အသင်းက ကစားသမား (၅) ယောက်လုံးဟာ အိန္ဒိယအသင်းတစ်သင်းမှာ သွားရောက်ဆော့ကစားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြည်ပကစားသမားတွေနဲ့ တွဲဆော့ခဲ့ရတာမျိုး မဟုတ်တဲ့အပြင် အိန္ဒိယ Dota2 အဆင့်အတန်းဟာလည်း မြန်မာနဲ့ ကွာခြားမှု ကြီးကြီးမားမား မရှိတာမလို့ ဒါကို နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံ အပြည့်အဝရတယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး။
အနီးစပ်ဆုံးအနေနဲ့ ယခု SEA Games Dota2 အသင်းက Insane ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ Clutch Gamer အသင်းမှာ သွားရောက်ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ရက်ပိုင်းခန့်သာ လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။
ဒါဟာ မြန်မာ Esports လောကအတွက် အလွန်တရာ နစ်နာတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့သာ Insane သာ Clutch Gamers မှာသာ ရေရှည်မဟုတ်တောင် လအနည်းငယ်လောက်ပဲ ဆော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ သူ့ရဲ့ Teammates တွေဆီကနေ အများကြီး သင်ယူခွင့်ရခဲ့မှာပါ။
ဘာတွေကွာခြားလဲ ဆိုတာ ထောက်ပြရရင် Insane Clutch Gamer ကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ချိန်က Teammate တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “Nikobaby” က TI9 ကို Mineski နဲ့ ကစားဖူးတဲ့အပြင် အခုလည်း Alliance လို အသင်းကြီးမျိုးမှာ လက်စွမ်းပြနိုင်နေပါပြီ။ နောက် ex-teammate တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ “kyxy” ကလည်း အခုလာမယ့် ဒုတိယ Major ဖြစ်တဲ့ DreamLeague 13 Leipzig Major မှာ Reality Rift အသင်းနဲ့အတူ ပါဝင်ခွင့် ရရှိထားပါတယ်။
Insane သာ အဲလို Teammate တွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေဆော့ဖူးလိုက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားအသင်းတွေမှာ ဘယ်လို ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်တယ်၊ ဘယ်လို Skill ကောင်းအောင်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လို နည်းစနစ်အသစ်တွေ ရှိတယ် ဆိုတာမျိုးကို သိရှိလာခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ခဲ့မှာ ဖြစ်လို့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် မြန်မာအသင်း 2-0 နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ Laos Dota2 အသင်းက Core3ယောက်လုံးဟာ ထိုင်းထိပ်သီး အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Alpha Red နဲ့ MSCerberus တို့မှာ ကာလအတန်ကြာ ကစားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ပြည်ပထွက်ကစားစေချင်တယ်ဆိုတာ Dota2 တင်မဟုတ်ပဲ အခြားဂိမ်းအမျိုးအစားတွေမှာပါ ကိုယ်ထူးချွန်ရင် ထူးချွန်သလို ပြည်ပကို ကြေးစား သွားရောက်ကစားစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်း ဘောလုံးနဲ့ ဘော်လီဘော အားကစားတွေမှာ ပြည်ပထွက်ကစားတဲ့ ကစားသမားတွေကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။
Esports ဆိုတာ ဘောလုံးလိုမျိုး လူသိများအခြေကျပြီးသား အားကစားနည်းတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ Esports ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်ဝင်ရောက်လာတာကြာပြီဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း ထွန်းကားလာတာက ၂,၃ နှစ်လောက်သာ ရှိပါဦးမယ်။ ဘောလုံးလို နှစ်ရာချီပြီး တည်ရှိလာတဲ့ အားကစားတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရသေးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။
အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်း Game အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် အတွေ့အကြုံရင့်ပြီး ဩဇာအာဏာညောင်းတဲ့ နည်းပြလို လူမျိုးတွေ ထွက်ရှိမှုနှုန်း အလွန်နည်းပါးပါတယ်။ ဆရာဖြစ်သင်တန်းလိုမျိုးလည်း မရှိတဲ့အတွက် ဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျွမ်းကျင်စွာဆော့တတ်ဖို့ လိုအပ်သလို နည်းစနစ်ပိုင်းကိုလည်း ထုံးလိုခြေ ရေလိုနှောက်ပြီး အမြဲ Up-to-date ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Game ဆိုသည်မှာလည်း သမာရိုးကျ အားကစားမဟုတ်တဲ့အတွက် မကြာခဏဆိုသလို Version Update များ ထွက်ပေါ်လာတာမလို့ တကယ်ထိရောက်မယ့် နည်းဗျူဟာတစ်ခုကို ပြသနိုင်မယ့် နည်းပြတစ်ဦးကတော့ အသင်းတိုင်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကစားသမားတွေ ဘယ်လောက်တော်တယ်ပြောပြော ကစားသမား Mindset နဲ့မဟုတ်ပဲ နည်းပြ သို့မဟုတ် သုံးသပ်သူ တစ်ယောက်လို အပေါ်စီးကနေ ခြုံငုံမြင်တွေ့နိုင်မယ့် လူတစ်ယောက်တော့ အသင်းတိုင်းမှာ လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပမာ Burmese Ghouls က PVNDV လို နည်းပြမျိုးဆိုရင် BG စဖွဲ့ကတည်းက ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ပွဲအတွေ့အကြုံသာမက ကစားသမားတွေနဲ့ပါ ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီး Respect တစ်ခု ရယူပြီးသားမလို့ သူဟာ နည်းပြအဖြစ် ရွေးခဲ့တဲ့လမ်း မှန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ထို့အတူ Dota2 အသင်းအနေနဲ့လည်း လက်ရှိအသင်းထဲက တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကစားသမားဘဝကို စတေးပြီး နည်းပြအဖြစ် ကူးပြောင်းသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လက်ရှိမှာ လက်ရွေးစင် Dota2 အသင်းသား ၅ ယောက်ထက် အတွေ့အကြုံနဲ့ အောင်မြင်မှုအပိုင်းမှာ သာတဲ့သူ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ သိရသလောက် အခု SEA Games မှာလည်း Dota2 အသင်းမှာ Coach/Analyst မပါသွားဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ တတိယ ရရှိခဲ့တဲ့ WESG SEA မှာဆိုရင် သူတို့နဲ့ အနီးကပ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် အသင်းဖော်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ “Phin Mel” က Manager အနေနဲ့ လိုက်ပါခဲ့ပါ သေးတယ်။
စာရေးသူအပေါ်မှာ ထောက်ပြခဲ့တဲ့ ၃ ချက်လုံးဟာ အခုအချိန်မှာသာ လိုအပ်ချက်တွေ ရျှိနပမယ့် နောင် ၁ နှစ် ၂ နှစ်လောက်အတွင်းမှာ ပြည်စုံလာနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ပြိုင်ပွဲတွေကလည်း အမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်လို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှ ပြည့်ဝသွားပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ပထွက်ဆော့ဖို့ ကိစ္စကလည်း SEA Games ပွဲကလွဲရင် အခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာ မြန်မာ Esports အသင်း အသီးသီးက လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာမလို့ မကြာခင် ပြည်ပအသင်းတွေကနေ ကမ်းလှမ်းခံရနိုင်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
နည်းပြတွေအနေနဲ့လည်း လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ ကစားသမားတွေ အသက်အရွယ်အရ လက်စွမ်းကျလာတဲ့အခါ နည်းပြဘဝအနေနဲ့ အတွေအကြုံတွေ ပြန်လည် မျှဝေပေးနိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ယခု ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ SEA Games Esports ကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝေဖန် အပြစ်တင်သူတွေထက် ကစားသမားတွေ စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ ဝိုင်းဝန်းအားပေးနေတဲ့ အမာခံ ပရိသတ်တွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၁ Vietnam SEA Games ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဖြစ်ဖြစ် Esports အနေနဲ့ ထပ်မံပါဝင်ခွင့် ရခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင် အားပေးမယ့်ပြည်သူတွေကို စိတ်ပျက်စေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အာမခံပါရစေ ခင်ဗျာ။